Iindaba -I-Bureau yaseVeritas yenza uPhononongo loNyaka lwe-ISO kwiThongke Flow Factory
I-Shanghai Tongke Flow Technology Co., Ltd.yinkampani ye-high-tech egxile kwi-R & D kunye nokuveliswa kokuhanjiswa kwamanzi kunye neemveliso zokonga umbane, ngeli xesha ngumboneleli wezisombululo zokonga umbane kumashishini. Ukusebenzisana neShanghai Tongji & Nanhui Science Hi-tech Park Co., Ltd, iTongke ingumnini weqela lobuchwephesha elinamava. Ngamandla obuchwephesha obunje iTongke iqhubeka nokulandela ubuchule kunye nokuseta amaziko ophando amabini "okuhambisa amanzi ngokufanelekileyo" kunye "nolawulo lokonga umbane olukhethekileyo" .Ngoku ngoku iTongke ifumene ngempumelelo uninzi lwenkqubela phambili yasekhaya ngobukrelekrele obuzimeleyo
amalungelo obunini bepropathi, anje nge "SPH series high esebenza kakuhle yempompo yokuziqinisa" kunye "nenkqubo yempompo yokonga umbane ephezulu kakhulu." Ngaxeshanye iTongke iphucule itekhnoloji yeempompo zemveli ezingaphezu kweshumi ezifana neturbine emi nkqo, impompo engena emanzini, isiphelo- Impompo yokufunxa kunye nempompo ye-multistage centrifugal pump, ekonyusa kakhulu inqanaba lobuchwephesha kwimigca yemveliso yemveli.
Iifektri zonke zidlulile kwi-BV eqinisekisiweyo ye-ISO 9001: 2015, i-ISO 14001 esemgangathweni yokuqinisekiswa kwenkqubo kunye neemveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi zithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-20.
Isatifikethi se-ISO 9001 sibonisa amandla ethu efektri ukuze sihlangane rhoqo kwaye sidlule kulindelo lwabathengi. Ngesi sizathu, abathengi abaninzi bafuna ababoneleli ukuba baqinisekiswe nge-ISO 9001 ukunciphisa umngcipheko wokuthenga imveliso okanye inkonzo engaphucukanga. Ishishini elifezekisa isatifikethi se-ISO 9001 liya kuba nakho ukufumana ukuphucuka okubonakalayo ekusebenzeni kombutho kunye nomgangatho wemveliso ngokunciphisa inkunkuma kunye neempazamo, kunye nokwandisa imveliso.
Inkqubo ye-ISO 9001 yoLawulo loMgangatho ngowona mgangatho uphuculo lomgangatho uthandwa kakhulu emhlabeni, unemibutho eqinisekisiweyo engaphezulu kwesigidi kumazwe ali-180 kwihlabathi liphela. Ngumgangatho kuphela kusapho lwemigangatho engama-9000 epapashwe nguMbutho waMazwe ngaMazwe woBume beMigangatho (i-ISO) onokusetyenziselwa injongo yovavanyo lokuhambelana. I-ISO 9001 ikwasebenza njengesiseko seminye imigangatho ethile ebalulekileyo yecandelo, kubandakanya izixhobo zonyango ze-ISO 13485), i-ISO / TS 16949 (yeemoto) kunye ne-AS / EN 9100 (i-aerospace), kunye nemigangatho yolawulo esetyenziswa ngokubanzi njenge-OHSAS I-18001 kunye ne-ISO 14001.